विवाहित महिलाले कहिल्यै लगाउनुहुँदैन यस्तो चिज, अन्यथा पतिलाई हुन्छ यस्तो खतरा ! – Online Khabar 24
विवाहित महिलाले कहिल्यै लगाउनुहुँदैन यस्तो चिज, अन्यथा पतिलाई हुन्छ यस्तो खतरा !
भनिन्छ कि विवाहित महिलाले सेतो साडी कहिले पनि लगाउनु हुँदैन, किनकी महिलालाई सेतो साडी लगाउनु अशुभ मानिन्छ।
यससँगै यो साडी विधवा महिलाको प्रतीक मानिन्छ किनकि जब एक महिलाको लोग्ने मर्दछन्, उनलाई सेतो साडी लगाउनु पर्छ। यस कारणले गर्दा विवाहित महिलाले सेतो साडी लगाउनु हुँदैन।
भनिन्छ कि चुराहरु विवाहित महिलाहरूको श्रृंगार हो तर सुहागिन विवाहित महिलाले कहिल्यै हातमा कालो चुरा लगाउनु हुँदैन किनकि यसले उनीहरूको वैवाहिक जीवनमा खतरा पार्दछ र पतिलाई पनि नोक्सान हुनसक्छ। यो खबर जिन्दगीको पानाबाट साभार गरियको हो ।
Prevपिल्स: कस्ता म’हिला हरुले प्रयोग गर्न सक्छ’न् ? कहिले खाने र कसरी गर्भ रहन दिंदैन ?
nextयो कस्तो पिडा ? एकै परिवारका ६ जनाको दा’हसंस्कार !